Kooxdayada Ma Fashil Ayay La doonayaan? Taageerayaasha Chelsea Oo Cadho & Aflagaado Ka Muujiyay In Kooxdoodu Ay Heshiis Cusub U Soo Bandhigtay Xidig Blues Ka Tirsan. - Gool24.Net
Kooxdayada Ma Fashil Ayay La doonayaan? Taageerayaasha Chelsea Oo Cadho & Aflagaado Ka Muujiyay In Kooxdoodu Ay Heshiis Cusub U Soo Bandhigtay Xidig Blues Ka Tirsan.
Kooxda Chelsea ayaa heshiis cusub oo laba sanadood ah u soo bandhigtay xidiga bartilmaameedka u ahaa Barcelona ee Willian laakiin qayb ka mid ah taageerayaasha Blues ayaa si cadho leh uga falceliyay.
Kadib markii uu Eden Hazard ku biiray kooxda Real Madrid isla markaana ayna wali maamulka Blues ogayn in ay xagaagan suuqa gali karaan, waxay go’aansadeen in heshiis cusub oo laba sanadood ah lagu abaal mariyo Willian.
Laakiin taageerayaasha Chelsea oo xili ciyaareedkan marar badan soo eedaynayay xidiga reer Brazil ayaa qalad u arka in Willian heshiis cusub oo laba sanadood ah laga saxiixayo.
Chelsea ayaa isku diyaarinaysa xili ciyaareed kale oo kala guur ah iyada oo Maurzio Sarri uu ka baxayo Stamford Bridge kadib markii uu hal xili ciyaareed oo kaliya kooxda soo hayay waxaana hada badalkiisa loo calaamadiyay Frank Lampard.
Frank Lampard oo gacanta ku haya kooxda heerka labaad ka ciyaarta ee Derby County ayay Chelsea ka bixin doontaa 4 milyan gini waana in hal milyan ka hoosaysa inta ay Juventus kaga helayso bixitaanka Maurizio Sarri.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Chelsea ayaa cadho wayn ka muujiyay in ka hor inta aan heshiis loo soo bandhigin Frank Lampard in Willian loo soo bandhigay dalab heshiis cusboonaysin laba sano ah.
Balse qaar kale oo ka mid ah taageerayaasha Chelsea ayayba aflgaado ka gaadhay in ay maqlaan heshiiska cusub ee laga saxiixayo Willian.
Taageere ka cadhaysan heshiiska cusub ee Willian ayaa soo qoray: “Iyada oo la tixgalinayo xaqiiqda ah in aynu sanadka xiga ciyaartoy la soo saxiixan karno, waa maxay sababta F**** ah ee uu Willian ku helay heshiiska labada sanadood ah. Maxaa inaga qaldan?”.
Taageere kale ayaa soo qoray: “Kaftan ayay ka badan tahay in abaal marinta heshiiska cusub ee Lampard ay ka hor martay, wali Willian ayaa mid helay, waa hal siyaasad jabineed. Klaiya waxay micno u samaynaysaa haddii aan doonayno in aan sare ugu qaadno qiimihiisa suuqa”.
“Marka aanad cid cusub la saxiixan karin, xataa ciyaartoyda dhex dhexaadka ah ayaa heshiis kordhin hela” ayuu taageere kale soo qoray”.
Taageere kale ayaa isna sii raaciyay: “Ma waxaad doonaysaa in ay kooxdayadu fashilnato?. Fariimo badan oo lagu diidan yahay heshiiska cusub ee Willian ayaa baraha bulshada lagu soo bandhigay.